တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီးH. E. Mr. Daniel Patrick Chugg အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ မဟာဝိသုတာရာမဈေးကုန်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓာနနာယက နိုင်ငံတော်ဩဝါဒါစရိယ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကဝိသာရ (သာသနဓဇ သိရီပဝရ ဓမ္မာစရိယ) ၏ အန္တိမ အဂ္ဂိဈာပန သာဓုကီဠန ပူဇာသဘင်အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး (၁၂/၂၀၂၁)သို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားပြုလုပ်၊ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဘရူနိုင်း ဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato Erywan Pehin Yusof နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး (၈/၂၀၂၁)သို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ(ICRC)ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Peter Maurer အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်‌ရေးကောင်စီဥက္ကဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ Phoenix ရုပ်သံမီဒီယာမှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မော်လမြိုင်မြို့ရှိ မြစေတီစာသင်တိုက် ဆရာတော်ကြီးနှင့် ကျိုက်သလ္လံစေတီတော်မြတ်ကြီး အား သွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညို၊ မွန်ပြည်နယ် အားကစားဥယျာဉ်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပေါင်မြို့နယ်ရှိ ပဒုမ္မာဆပ်ပြာစက်ရုံသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီးH. E. Mr. Daniel Patrick Chugg အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ရေးသားသူ - Admin ထင်မြင်ချက် မရှိသေးပါ
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ – ၅
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရသည့္ H. E. Mr. Daniel Patrick Chugg အား ယေန႔နံနက္ပုိင္း တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးႏွင့္အတူ စစ္သံမွဴး Col. Nigel Goodwi ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကားဆက္ဆံမႈ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး အား အမွတ္တရလက္ေဆာင္ ပစၥည္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် – ၅
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗြိတိန် နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသည့် H. E. Mr. Daniel Patrick Chugg အား ယနေ့နံနက်ပိုင်း တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Col. Nigel Goodwi နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြ သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံနှင့်နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ် အကြားဆက်ဆံမှု တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး အား အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းပေး အပ်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daniel Patrick Chugg အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ၌ ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သော စစ်သည်များ၊ တပ်မတော်သားမိသားစုဝင် သားသမီးများ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင် သားသမီးများ၊ ဘက်စုံပညာထူးချွန်လူငယ်များ၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဆောင်းပါး/ စာစီစာကုံး/ပန်းချီ/ကာတွန်း ဆုရရှိသူများနှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် တက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်ခံရသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြား
တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများနှင့်အလှူရှင်များမှ စုပေါင်းလှူဒါန်းသည့် မန္တလေးမြို့၊ မဟာဝိဇိတာရုံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၏ အရှေ့ဘက်မုခ်ဦးနှင့်တံတိုင်း ၂၁၈ ခန်း ရေစက်ချအလှူမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပ
ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပအိုဝ်းငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ (PNO) အသွင် ပြောင်းပြည်သူ့စစ်(ဌာနေ)အဖွဲ့ နာယက ဦးအောင်ခမ်းထီနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများ ဆွေးနွေး (ရုပ်သံသတင်း)
ဇန်နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၂၀ Admin 0
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ကျင်းပ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၊ ၂၀၂၁ Admin 0
ပြန်စာထားခဲ့ပါ။ ပြန်စာ ပယ်ဖျက်ပါ
သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၂၁ Admin 0
နေပြည်တော်၊ ဇွန် – ၁၄ ဘဝနတ်ထံစံလွန်တော်မူခဲ့သည့် နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ မဟာဝိသုတာ ရာမ ဈေးကုန်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓာနနာယက နိုင်ငံတော်ဩဝါဒါစရိယ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကဝိသာရ (သာသနဓဇ သိရီပဝရ ဓမ္မာစရိယ) ၏ အန္တိမအဂ္ဂိဈာပနသာဓုကီဠန ပူဇာ
ဇွန် ၇၊ ၂၀၂၁ Admin 0
ဇွန် ၆၊ ၂၀၂၁ Admin 0
ဇွန် ၄၊ ၂၀၂၁ Admin 0
တပ်မတော်သည် ပြည်သူကြားမှပေါက်ဖွားလာပြီး ပြည်သူများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သဖြင့် မိမိတပ်ကို ကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုသည့်အပြင် မိမိနိုင်ငံတော် တိုးတက် ကောင်းမွန်ရေး အတွက် တစ်ဦးချင်းအသိစိတ်ဖြင့်နေထိုင်ကျင့်ကြံဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်
စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး မီးရှူးတန်ဆောင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီ၏ နှစ်(၁၅၀)ပြည့် ဂုဏ်ပြုအထိမ်းအမှတ် နံ့သာဖြူပင် စိုက်ပျိုး
စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နီပေါနိုင်ငံသမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ချုပ်ဆိုခြင်း (၄)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်း အနားတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပြောကြားသည့် နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကား
အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော်ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ Marsun Public Company Ltd. နှင့် I Group Ltd. များသို့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှု
နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၉ Admin 0
ဇွန် 2021 (၁၃)
မေ 2021 (၁၇)
ဧပြီ 2021 (၂၇)
မတ် 2021 (၅၃)
ဖေဖော်ဝါရီ 2021 (၄၄)
ဇန်နဝါရီ 2021 (၂၈)
ဒီဇင်ဘာ 2020 (၄၆)
နိုဝင်ဘာ 2020 (၄၆)
အောက်တိုဘာ 2020 (၃၄)
စက်တင်ဘာ 2020 (၃၄)
ဩဂုတ် 2020 (၃၃)
ဇူလိုင် 2020 (၃၉)
ဇွန် 2020 (၃၁)
မေ 2020 (၁၉)
ဧပြီ 2020 (၁၈)
မတ် 2020 (၄၇)
ဖေဖော်ဝါရီ 2020 (၅၉)
ဇန်နဝါရီ 2020 (၄၁)
ဒီဇင်ဘာ 2019 (၈၁)
နိုဝင်ဘာ 2019 (၄၄)
အောက်တိုဘာ 2019 (၆၇)
စက်တင်ဘာ 2019 (၅၉)
ဩဂုတ် 2019 (၅၅)
ဇူလိုင် 2019 (၄၂)
ဇွန် 2019 (၄၃)
မေ 2019 (၃၆)
ဧပြီ 2019 (၇၄)
မတ် 2019 (၆၀)
ဖေဖော်ဝါရီ 2019 (၅၄)
ဇန်နဝါရီ 2019 (၅၄)
ဒီဇင်ဘာ 2018 (၆၉)
နိုဝင်ဘာ 2018 (၁၇)
အောက်တိုဘာ 2018 (၂၇)
စက်တင်ဘာ 2018 (၂၉)
ဩဂုတ် 2018 (၃၅)
ဇူလိုင် 2018 (၃၉)
ဇွန် 2018 (၂၈)
မေ 2018 (၃၃)
ဧပြီ 2018 (၃၅)
မတ် 2018 (၅၁)
ဖေဖော်ဝါရီ 2018 (၄၂)
ဇန်နဝါရီ 2018 (၄၄)
ဒီဇင်ဘာ 2017 (၄၈)
နိုဝင်ဘာ 2017 (၄၁)
အောက်တိုဘာ 2017 (၃၇)
စက်တင်ဘာ 2017 (၂၇)
ဩဂုတ် 2017 (၂)
မူပိုင် © ၂၀၂၁ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်.